Sida loo sameeyo buug yar | Hal-abuurka khadka tooska ah
Weligaa buug yar ma laguu diray? Ma samaysay markii ugu horeysay mise waa inaad wax ka bedeshaa sababtoo ah macmiilku ma jeclayn? Ma taqaanaa sida loo sameeyo buug-yaraha aqbalaadda marka ugu horreysa?
Haddii aad rabto in aad hesho saldhigyo aad ku samayso buug-yaraha guulaysta, in aanu macmiilku dib kuu celin karin, markaa waa in aad eegtaa waxa aanu kuu diyaarinay.
1 waa maxay buug-yar
2 Dhinacyada laga fiirsado buug-yaraha
2.1 Dooro dulucda buug-yarahaaga
2.3 Shabakadaha bulshada / Xiriirka / Logo
3 Sida loo sameeyo buug yar oo qof kastaa rabo inuu haysto
3.1 Wax ka beddel dukumeentiga qoraalka
3.2 Deji waxa ay noqonayaan qaybaha buug-yaraha
3.3 waqtiga naqshadeynta
3.4 Had iyo jeer, had iyo jeer, had iyo jeer... daabac
waa maxay buug-yar
Buug-yaraha waxaa loo qaabayn karaa inuu yahay qoraal si gaar ah loo daabacay, oo badiyaa ku dul qoran waraaqo yaryar oo qaabab kala duwan leh oo isticmaalkooduna yahay xayeysiis. Markii hore, buug-yarahaan waxaa lagu bixin jiray gacanta ama waxaa laga heli karaa soo dhaweynta shirkadaha. Laakiin hadda waxay sidoo kale bilaabeen in lagu qaybiyo boostada ama xitaa email ahaan, qaab dijital ah.
Midda ugu caansan waa buug-yaraha oo afar gees ah oo loo qaybiyay saddex qaybood, wadar ahaan 6 dhinac oo qoraal ah iyo sawirro; waxa loo yaqaan triptychs. Inkasta oo aad sidoo kale qaadan karto diptychs.
Dhinacyada laga fiirsado buug-yaraha
Markaad samaynayso buug-yaraha, waa inaad xisaabta ku dartaa qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka ah, taas oo ah, walxaha ay tahay inaad tixgeliso oo ka muuqda dhammaan buug-yaraha, haa ama haa. Macluumaadkaas la'aanteed, abuurista mid ayaa ku xigta wax aan macquul ahayn, ama waxaad ku dambayn doontaa guuldarro oo aanad helin dhammaan faa'iidooyinka aad rajaynayso inaad hesho.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa loo baahan yahay?
Dooro dulucda buug-yarahaaga
Bal qiyaas inaad shirkad leedahay. Shirkadani waxa ay doonaysaa in ay isu sheegto maalgashadayaasha iman kara. Waxaadna go'aansatey in buug-yarahaaga aadan kaliya ka hadlin shirkadda, cidda sameysa, adeegyada, ujeedooyinka ... laakiin sidoo kale sida ay uga shaqeyn karaan shirkadda.
Oo hadda waxaan ku waydiinaynaa, maalgeliyaha xiisaynaya inuu shaqo weydiisto shirkaddaada? Midda ugu badan ayaa ah, marka ay meeshaas gaaraan, oo ay arkaan in ay tahay xog aan iyaga faa'iido u lahayn, ay iska tuuraan fikradda.
Aad bay muhiim u tahay inaad si cad u qeexdo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aad la hadli doonto sababtoo ah markaa kaliya ayaad awoodi doontaa inaad ogaato nooca macluumaadka ay tahay inaad geliso buug-yaraha.
Oo haa, waxaan ka hadlaynaa qoraalka. Waxaad u baahan tahay dukumeenti qoraal ah kaas oo wax kasta oo aad rabto inaad dhigto lagu qaabeeyey. Waa la soo bandhigi doonaa mar dambe, laakiin haysashada macluumaadka, way sahlanaan doontaa in lagu shaqeeyo.
Had iyo jeer tayada. Waxaa jira kuwa ku dara sawirada iyo vectors, si ay u nooleeyaan liisaska ama dhibcaha qaarkood. Wax dhib ah kuma jiro in la sameeyo mar haddii aan lagu xadgudbin.
Isticmaalka sawiradu waxay nafisisaa aragga qoraalka oo keliya, sidoo kale waxay ka dhigtaa mid soo jiidasho leh.
Shabakadaha bulshada / Xiriirka / Logo
Qodob muhiim ah, iyo kuwa badan oo illoobay, waa in la dhigo astaanta shirkadda (sida caadiga ah daboolka hore iyo dambe) iyo sidoo kale qaabka xiriirka iyo / ama shabakadaha bulshada si dadku ay u helaan.
Waa maxay macluumaadka lagama maarmaanka ah? Magaca shirkadda, website-ka, shabakadaha bulshada, WhatsApp (haddii la heli karo), iimaylka iyo telefoonka.
Taas waxaad ku siin doontaa isticmaalayaasha hab ay kula soo xiriiraan haddii ay xiisaynayeen macluumaadka ku jira buug-yaraha.
Sida loo sameeyo buug yar oo qof kastaa rabo inuu haysto
Qodobka hore waxaan sidoo kale kaaga sheegi karnaa barnaamijka habaynta ama habaynta wanaagsan ee samaynta buug-yaraha laakiin runtu waxay tahay, maadaama ay aad u badan yihiin oo ay fududahay in la helo codsiyada iyo website-yada kaa caawinaya naqshadeynta, waanu iska indhatiray. waa.
Waxa aan kuu sheegnay, waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad shaqada ugu dhaadhacdo, haddii aad ku dejiso Word, Photoshop ama codsi moobil ah.
Aan raacno tillaabooyinka ay tahay inaad qaaddo?
Wax ka beddel dukumeentiga qoraalka
Waxaan ku bilownaa kuwa ugu adag, iyo waxa ku qaadan doona saacadaha ugu badan. Waana in macluumaadka aad ku dhejisay dukumentigaas laga yaabo inuu aad u ballaadhan yahay buug-yaraha, waana in la soo koobaa. Laakin, marka lagu daro, waa in loo akhriyaa dadka isticmaala.
Maxaan uga jeednaa? Hagaag, waxaan u baahanahay inay saameyn ku yeelato, si aan ugu adeegno si aysan u iloobin 30 ilbiriqsi kadib akhrinta. Taas awgeed, qoraal-qorista iyo sheeko-qorista ayaa lama huraan ah.
Deji waxa ay noqonayaan qaybaha buug-yaraha
Haddii aadan aqoon, buug-yaraha wuxuu leeyahay dhowr qaybood oo muhiim ah kuwaas oo ah kuwan soo socda:
Koofida. Waa waxa aan ugu yeeri karno daboolka waana kan samaynta dareenka ugu fiican haddii aad rabto inay furto.
Cinwaannada gudaha. Waa qoraal-hoosaadyo doonaya inay abaabulaan macluumaadka isla markaana soo jiitaan dareenka.
Qoraal Qaybta tayada, la soo koobay iyo in ay maamusho in ay la xiriirto akhristaha.
Sawirada La dhex dhigo qoraalka si uu u yaraado.
Logo xidhidh Waxay noqon doontaa daboolka dambe, sida daboolka, waa inay sidoo kale ka tagto "dhadhan wanaagsan afka".
Waxaan kugula talineynaa inaad sameyso sawir qaybinta qayb kasta oo ka mid ah qaybaha si aad u aragto sida wax walba u ekaan lahaayeen ka hor inta aanad bilaabin naqshadaynta.
Dhab ahaantii, waxaa jira barnaamijyo badan oo kaa caawin kara inaad tan sameyso, laga bilaabo kuwa ugu fudud sida Microsoft Word ama Google Docs ilaa kuwa ugu adag sida Adobe inDesign, LucidPress, Photoshop ...
Waa inaad xisaabta ku dartaa nooca buug-yaraha aad naqshadaynayso, gaar ahaan inaad u qaybiso macluumaadka si, laalaab, mid kasta oo ka mid ah macno samaynayo.
Halkaa marka ay marayso nakhshadeynta waxaa lagu fulin karaa qaab-dhismeedka (labadaba bilaash ah iyo labadaba) ama laga bilaabo xoqan. Haddii aad khibrad u leedahay, kan labaad wuxuu ku siinayaa xorriyad badan oo waxaad abuuri kartaa naqshado kala duwan; marka ugu horeysa waxaad noqon doontaa mid xadidan oo kaliya booska, cabbirka sawirada iyo naqshadeynta.
Markaad naqshadaynayso, waa inaad xisaabta ku dartaa arrimaha soo socda:
Ha isticmaalin wax ka badan laba ama saddex midab. Minimalism-ka ayaa ah kan ugu fiican sababtoo ah haddii aad ku dhejiso midabyo badan dhamaadka, dadku way kala firdhiyaan ama waa mid aad u dhalaalaya oo aan jeclayn.
Ha isticmaalin wax ka badan laba farood. Sidoo kale; waxaad lumin doontaa shakhsiyadda adigoo isticmaalaya dhowr. Mid u isticmaal cinwaano iyo qoraal hoosaadyo iyo mid qoraal ahaan.
Buug-yaruhu ha neefsado. Tan waxaan rabnaa inaan kuu sheegno inaadan culeyska saarin. Waxaa muhiim ah in aad meel bannaan uga tagto naqshadda si aysan dadku u arkin macluumaad badan oo ay u noqdaan kuwo aad u dhib badan (oo aysan akhriyin).
Had iyo jeer, had iyo jeer, had iyo jeer... daabac
Kahor intaadan daabicin tiro wanaagsan oo buug-yaraha ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad daabacdo mid, xitaa ka daabacaadda guriga. Ujeedadu waa in la hubiyo in dhammaan macluumaadka ay sax yihiin, in aan waxba la gooyn margin ama laalaab iyo in wax walba si fiican loo habeeyey.
Markaad sameyso, waxaad u soo bandhigi kartaa macmiilka ama waxaad u diri kartaa daabacaadda kama dambaysta ah.
Hadda ma kuu caddahay sida loo sameeyo buug yar?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo sameeyo buug yar
Taariikhda astaanta Vans